ဒီတစ်ပတ်အတွင်း နာမည်ကြီးခဲ့သမျှနည်းပညာသတင်းများ – DigitalTimes.com.mm
188 Shares 129 Views
ဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ နည်းပညာသတင်းလေးတွေကို အကြမ်းဖျင်းသိရအောင် အကျဉ်းချုပ်ပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. HTC U12+ ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သတင်း
၂. Xiaomi MI 8 ကိုမေလ၃၁ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်တော့မယ့်သတင်း
၃. ဇွန်လ ၁၂ရက်နေ့မှာ Vivo Apex စမတ်ဖုန်းတွေမိတ်ဆက်တော့မယ့်သတင်း
၄. Samsung Galaxy S Light Luxury ဖုန်းတွေကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သတင်း
၅. ZTE က အမေရိကန်ထုတ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကို ပြန်လည်ဝယ်ယူခွင့်ရသွားတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
HTC ကနေစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ U12+ ဖုန်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါပြီ။ 6-ich Super LCD6Display, 18:9 ratio display, 1440×2280 p resolution (537ppi), IP68, Snapdragon 845 တွေကိုသုံးထားပြီး HTC ရဲ့ Edge sense နည်းပညာလည်းပါတဲ့အဆင့်မြင့်ဖုန်းတစ်လုံးပါ။
နောက်ဘက်မှာ 12MP+16MP (2x optical zoom) ကိုမှ feature အစုံနဲ့သုံးနိုင်ပြီးရှေ့ဘက်မှာ 8MP ကင်မရာ၂လုံးသုံးထားပါတယ်။ 4K ဗီဒီယိုတွေကို 60fps နဲ့ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပြီး RAM 6GB, storage 64GB/128GB ပါ။
—-> သတင်းအပြည့်အစုံဖတ်ရန် <—-
Xiaomi ကုမ္ပဏီတည်ထောင်တာ ၈နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ Mi7အစား Mi 8 လို့နာမည်ပေးပြီးမိတ်ဆက်လာတော့မှာပါ။ 6.01-inch display, Snapdragon 845, 3D Face Unlock, RAM 6GB/8GB , Storage 64GB/128GB, မျက်နှာပြင်အောက် under display fingerprint scanner, MIUI 10 တို့နဲ့ မေလ ၃၁ရက်နေ့မှာပွဲထွက်လာတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။
နောက်ပိုင်းစမတ်ဖုန်းတွေမှာ မျက်နှာပြင်ကျယ်အောင်လုပ်လာရာကနေ notch တွေစခေတ်စားလာပါတယ်။ နောက်ပိုင်းဖုန်းတိုင်းလိုလို ပါလာတော့ notch မပါဘဲ full view စစ်စစ်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Vivo Apex စမတ်ဖုန်းနဲ့ Vivo က သက်သေပြလိုက်ပါတယ်။ earpiece အတွက် Screen Sound casting နည်းပညာ၊ သုံးမယ့်အချိန်မှထွက်လာမယ့် Pop up ကင်မရာ၊ ရှေ့မျက်နှာပြင်တစ်ဝက်လုံးမှာ ကြိုက်တဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးလော့ခ်ဖွင့်နိုင်တဲ့ in-display fingerprint scanner ဒါတွေကတော့ သူများနဲ့မတူတဲ့ APEX စမတ်ဖုန်းရဲ့ အဓိက feature တွေပါ။ ဒီဖုန်းတွေကိုတော့ လာမယ့်ဇွန်လ ၁၂ရက်နေ့မှာမြင်တွေ့ရတော့မယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
Samsung Galaxy S8 Lite လို့သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းကတော့ Samsung Galaxy S Light Luxury ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ 5.8 inch Infinity display( Super AMOLED panel) 1080x2220p resolution, 18.5:9 ratio, 4K ဗီဒီယိုတွေကို 30fps နဲ့ရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ နောက်ဘက် 16MP ကင်မရာ ရှေ့ဘက် 8MP ကင်မရာတွေပါပါတယ်။ Snapdragon 660 chipset, RAM 4GB, storage 64GB, 3000 mAh battery, အားသွင်းအမြန်စနစ်, IP68, 3.5mm နားကြပ်ပေါက်, USB-C ပေါက်၊ ကျောဘက် fingerprint scanner, Bixby ခလုတ်တွေပါတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံးပါ။ ဈေးကတော့ ၆၂၅ဒေါ်လာလောက်ရှိပါတယ်။
၅. ZTE က အမေရိကန်ထုတ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကို ပြန်လည်ဝယ်ယူခွင့်ရသွားတဲ့သတင်း
Qualcomm ရဲ့ processor တွေကိုအီရန်နိုင်ငံကိုရောင်းချတဲ့ကိစ္စကြောင့် အမေရိကန်က Qualcomm chipset တွေ အမေရိကန်ထုတ်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကို ZTEဆီမရောင်းချဖို့ တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲ သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က တားမြစ်ချက်ကိုရုတ်သိမ်းပြီး ဒဏ်ငွေတပ်လိုက်ပါတယ်။ ZTE ကြောင့်မို့ အမေရိကန်နဲ့ တရုတ်ဆိုတဲ့ စီးပွားရေးနိုင်ငံကြီး၂ခုကြား စီးပွားရေးတင်းမာမှုတွေ ပြေလျော့လာလိမ့်မယ်လို့တော့ မှန်းရပါတယ်။
ဒီတဈပတျအတှငျးမှာပဲဖွဈပကျြခဲ့တဲ့ နညျးပညာသတငျးလေးတှကေို အကွမျးဖငျြးသိရအောငျ အကဉျြးခြုပျပွီး ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁. HTC U12+ ကိုမိတျဆကျလိုကျတဲ့သတငျး
၂. Xiaomi MI 8 ကိုမလေ၃၁ရကျနမှေ့ာမိတျဆကျတော့မယျ့သတငျး
၃. ဇှနျလ ၁၂ရကျနမှေ့ာ Vivo Apex စမတျဖုနျးတှမေိတျဆကျတော့မယျ့သတငျး
၄. Samsung Galaxy S Light Luxury ဖုနျးတှကေိုမိတျဆကျလိုကျတဲ့သတငျး
၅. ZTE က အမရေိကနျထုတျပစ်စညျးအစိတျအပိုငျးတှကေို ပွနျလညျဝယျယူခှငျ့ရသှားတဲ့သတငျးတှပေဲဖွဈပါတယျ။
HTC ကနစှေမျးဆောငျရညျမွငျ့တဲ့ U12+ ဖုနျးကိုမိတျဆကျခဲ့ပါပွီ။ 6-ich Super LCD6Display, 18:9 ratio display, 1440×2280 p resolution (537ppi), IP68, Snapdragon 845 တှကေိုသုံးထားပွီး HTC ရဲ့ Edge sense နညျးပညာလညျးပါတဲ့အဆငျ့မွငျ့ဖုနျးတဈလုံးပါ။
နောကျဘကျမှာ 12MP+16MP (2x optical zoom) ကိုမှ feature အစုံနဲ့သုံးနိုငျပွီးရှဘေ့ကျမှာ 8MP ကငျမရာ၂လုံးသုံးထားပါတယျ။ 4K ဗီဒီယိုတှကေို 60fps နဲ့ရိုကျကူးနိုငျမှာဖွဈပွီး RAM 6GB, storage 64GB/128GB ပါ။
—-> သတငျးအပွညျ့အစုံဖတျရနျ <—-
Xiaomi ကုမ်ပဏီတညျထောငျတာ ၈နှဈပွညျ့တဲ့အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ Mi7အစား Mi 8 လို့နာမညျပေးပွီးမိတျဆကျလာတော့မှာပါ။ 6.01-inch display, Snapdragon 845, 3D Face Unlock, RAM 6GB/8GB , Storage 64GB/128GB, မကျြနှာပွငျအောကျ under display fingerprint scanner, MIUI 10 တို့နဲ့ မလေ ၃၁ရကျနမှေ့ာပှဲထှကျလာတော့မယျလို့သိရပါတယျ။
နောကျပိုငျးစမတျဖုနျးတှမှော မကျြနှာပွငျကယျြအောငျလုပျလာရာကနေ notch တှစေခတျေစားလာပါတယျ။ နောကျပိုငျးဖုနျးတိုငျးလိုလို ပါလာတော့ notch မပါဘဲ full view စဈစဈစမတျဖုနျးတဈလုံးထုတျနိုငျတယျဆိုတဲ့အကွောငျးကို Vivo Apex စမတျဖုနျးနဲ့ Vivo က သကျသပွေလိုကျပါတယျ။ earpiece အတှကျ Screen Sound casting နညျးပညာ၊ သုံးမယျ့အခြိနျမှထှကျလာမယျ့ Pop up ကငျမရာ၊ ရှမေ့ကျြနှာပွငျတဈဝကျလုံးမှာ ကွိုကျတဲ့နရောကိုနှိပျပွီးလော့ချဖှငျ့နိုငျတဲ့ in-display fingerprint scanner ဒါတှကေတော့ သူမြားနဲ့မတူတဲ့ APEX စမတျဖုနျးရဲ့ အဓိက feature တှပေါ။ ဒီဖုနျးတှကေိုတော့ လာမယျ့ဇှနျလ ၁၂ရကျနမှေ့ာမွငျတှရေ့တော့မယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။
Samsung Galaxy S8 Lite လို့သတငျးထှကျခဲ့တဲ့ဖုနျးကတော့ Samsung Galaxy S Light Luxury ဆိုတဲ့နာမညျနဲ့ တရုတျနိုငျငံမှာမိတျဆကျလိုကျပါပွီ။ 5.8 inch Infinity display( Super AMOLED panel) 1080x2220p resolution, 18.5:9 ratio, 4K ဗီဒီယိုတှကေို 30fps နဲ့ရိုကျကူးနိုငျတဲ့ နောကျဘကျ 16MP ကငျမရာ ရှဘေ့ကျ 8MP ကငျမရာတှပေါပါတယျ။ Snapdragon 660 chipset, RAM 4GB, storage 64GB, 3000 mAh battery, အားသှငျးအမွနျစနဈ, IP68, 3.5mm နားကွပျပေါကျ, USB-C ပေါကျ၊ ကြောဘကျ fingerprint scanner, Bixby ခလုတျတှပေါတဲ့ ဖုနျးတဈလုံးပါ။ ဈေးကတော့ ၆၂၅ဒျေါလာလောကျရှိပါတယျ။
၅. ZTE က အမရေိကနျထုတျပစ်စညျးအစိတျအပိုငျးတှကေို ပွနျလညျဝယျယူခှငျ့ရသှားတဲ့သတငျး
Qualcomm ရဲ့ processor တှကေိုအီရနျနိုငျငံကိုရောငျးခတြဲ့ကိစ်စကွောငျ့ အမရေိကနျက Qualcomm chipset တှေ အမရေိကနျထုတျပစ်စညျးအစိတျအပိုငျးတှကေို ZTEဆီမရောငျးခဖြို့ တားမွဈလိုကျပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးကပဲ သမ်မတ ဒျေါနယျထရမျ့က တားမွဈခကျြကိုရုတျသိမျးပွီး ဒဏျငှတေပျလိုကျပါတယျ။ ZTE ကွောငျ့မို့ အမရေိကနျနဲ့ တရုတျဆိုတဲ့ စီးပှားရေးနိုငျငံကွီး၂ခုကွား စီးပှားရေးတငျးမာမှုတှေ ပွလြေော့လာလိမျ့မယျလို့တော့ မှနျးရပါတယျ။
Xiaomi Mi 8 ရဲ့ ဘူးခွံ ဓါတ်ပုံ ထွက်ပေါ်လာ